Siyaasi dhaliilay Qudbqdii Farmaajo ee Guusha Badda Soomaliyeed | Dayniile.com
Home Warkii Siyaasi dhaliilay Qudbqdii Farmaajo ee Guusha Badda Soomaliyeed
Farmajo asagoo og in dowladda federaalka ku dhex jirto qalalaase siyaasadeed iyo mid nabadgelyo ayuu khudbad aan la turxaan bixin ka jeediyay munaasabada go’aanka Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda ka gaartay dacwada badda ee u dhexeysay Soomaaliya iyo Kenya. Nuxur ahaan, khudbaddu waxay aheyd mid isburrineysa oo dhaawaceysa danta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed, lagana kaaftoomi karay. Marka laga reebo mahadcelinta Madaxdii iyo shakhsiyaadii doorka wanaagsan ku lahaa guusha dacwada badda, khudbaddu waxay aheyd mid xambaarsan caro, ciilqab, eedeyn, iyo abaal sheegasho been ku saleysan.
Khudbadda waxay aheyd iidheh siyaasadeed, xaqiiqada aad uga fog. Farmajo oo og inuu amray soo celinta xiriirka diblomasi ee Kenya, dhawaan RW Roble iyo xubno Golaha Wasiirrada booqasho saaxibtinnimo ku tageen Nairobi si loo hagaajiyo xiriirka labada dal, maanta Soomaaliya ku guuleysatay dacwada badda, ayuu weerar ku qaaday Madaxda Kenya, una jeediyay dhalliilo badan, isla markaana wuxuu sheegay in labada dal deris yihiin, dano badan ka dhexeeyaan, loona baahan yahay inay wada shaqeeyaan. Hal mar ma wada dhici karaan weerar, dhallil, cambaareyn, eedeyn, iyo wada shaqeyn labo dal oo cadow isku ah.
Farmaajo wuxuu kaloo weeraray DG Jubbaland oo ku tilmaamay saxiibka cadowga dowladda federaalka Soomaaliya oo ah Kenya. Colaadda Farmaajo ee Jubbaland waa ma haraan.
Farmajo ma hubsan in Is afgaradka (MOU) dhexmaray Kenya iyo Soomaaliya 2009 uu furo u ahaa guusha Soomaaliya ee dacwada badda. Inkastoo Barlamaanka Federaalka Soomaaliya diiday Is afgaradka (MOU), hase yeeshe Maxkamadda caalamiga waxay is afgaradka (MOU) u cuskatay inay awood u leedahay dhegeysiga dacwada badda iyo diidmada doodda Kenya ee la xiriiray in Soomaaliya oggolaatay sheegashadeeda badda iyo in Soomaaliya ka tanaashusay lahaanshaha baddeeda.
Fashilka dowladda farmajo ayaa sabab u ah in Maxkamadda Caalamiga go’aansato samirsiinta Kenya oo la siiyay dhul badeed aysan xaq u laheyn.
Khudbadda Farmajo waxay tusaale u tahay siyaasadda qasan, aan ka fiirsiga laheyn, hadafkeedu yahay gaaridda dano shakhsi ah ee 4 sano iyo bar dalka ka socotay. Rajadu waxay tahay in Soomaaliya hesho hoggaan ka samatabixiya godka ay maanta ku jirto idinka ilaahey.
Previous articleGaari ay saarnaayeen Shacab oo ku gubtay degaan hoos taga Mudug
Next articleXukuumadda Soomaaliya oo sheegtay markale in ay difaacanayso baddeeda
Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson iyo hogaamiyayaal kale ayaa waxa ay xirmooyin ubax ah dhigeen hoolka Kaniisaddii lagu dilay xildhibaan David Ammess, oo ka...